KEDU IHE OMUME KACHA MMA MAKA ỊRỤ ỌRỤ NA IHE OYIYI ISO? - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Otu n'ime ihe oyiyi disk kachasị ewu ewu nke nwere ike ịchọta na net bụ ịrụ ụka na usoro ISO. Ihe kachasị mma bụ na o yiri ka ọ bụ ọtụtụ ihe omume na-akwado usoro a, ma olee otu ọ dị mkpa iji chekwaa onyinyo a na diski ma ọ bụ mepụta ya - ozugbo na mgbe ahụ ...
N'isiokwu a, m ga-achọ ịtụle usoro kachasị mma maka ịrụ ọrụ na ihe oyiyi ISO (n'echiche nke m, n'ezie).
Site na ụzọ, a na-enyocha ihe ngwongwo ịmekọrịta ISO (nchọpụta dị na CD Rom'e kwadoro) na ihe na-adịbeghị anya:
Nke a bụ eleghị anya usoro kachasị mma iji rụọ ọrụ na ISO. Ọ na-enye gị ohere imeghe ihe oyiyi ndị a, dezie, mepụta ha, gbaa ha ọkụ na ikpo ọkụ.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-etinye Windows, ị nwere ike ịchọrọ windo ma ọ bụ diski. Iji dee akwụkwọ mpịakọta dị otú ahụ, ịkwesịrị iji utịp UltraISO (site na ụzọ, ọ bụrụ na ederede ọkụ adịghị ede ya n'ụzọ ziri ezi, mgbe ahụ Bios agaghị ahụ ya).
N'agbanyeghị, usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịkụcha ihe oyiyi nke disk disks na disks (ọ bụrụ na ị ka nwere, n'ezie). Ihe dị mkpa: enwere nkwado maka asụsụ Russian.
Ihe ọzọ na-akpali mmasị. Ọnụ ọgụgụ nke ọrụ na ike dị ịtụnanya! Ka anyị jegharịa site na isi.
- mepụta ihe oyiyi ISO site na diski CD / DVD;
- ichota CD / DVD / Blu-ray diski;
- Iwepụ rips site na CD;
- ikike imeghe ihe oyiyi na windo nke oma;
- mepụta ngwa ngwa ọkpụkpọ;
- nchekwa nchekwa nke Zip, Rar, 7Z;
- mpikota onu ISO oyiyi n'ime proprietary DAA usoro;
- nkwado asụsụ Russian;
- Nkwado maka isi ederede Windows: XP, 2000, Vista, 7, 8.
- a na-akwụ ụgwọ ihe omume ahụ.
Ezigbo usoro maka ịrụ ọrụ na ihe oyiyi (ọ bụghị naanị na ISO, mana ọtụtụ ndị ọzọ: biini, ccd, mdf, wdg). Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị na mmemme a bụ ihe dị mfe ya, mma dị mma, na-elekwasị anya na onye mbido (ọ na-edozi ebe ị ga-esi pịa na ihe).
- Ihe okike nke ISO site na disk, site na faịlụ na nchekwa;
- Ịtụgharị ihe oyiyi site n'otu usoro gaa na nke ọzọ (nhọrọ kachasị mma n'etiti ụlọ ọrụ ndị ọzọ nke ụdị a);
- emeghe ihe oyiyi maka edezi;
- emulation nke ihe oyiyi (mepee oyiyi dị ka ma ọ bụrụ na ọ bụ ezigbo disk);
- dee ihe oyiyi ka ha bụrụ ezigbo diski;
- nkwado maka Windows 7, 8;
- a kwụrụ ihe omume ahụ;
- ole na ole ọrụ metụtara UltraISO (ọ bụ ezie na arụ ọrụ na-adịkarịghị eji na ọtụtụ na-adịghị mkpa).
Otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ochie nke ụdị a. Ọ bụ mgbe ọ dị nnọọ ewu ewu, ma mgbe ahụ ceded ya laurels ebube ...
Site n'ụzọ, ndị mmepe ka na-akwado ya, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na sistemụ arụmọrụ Windows ọ bụla: XP, 7, 8. E nwekwara nkwado maka asụsụ Russian * (ọ bụ ezie na ụfọdụ ebe akara ajụjụ na-apụta, ma ọ bụghị ihe dị egwu).
Nke isi atụmatụ:
- Ị nwere ike ịmepụta ihe oyiyi ISO ma kpọọ ha ọkụ;
- enwere nkwado maka mebere CD-Rom'ov;
- Ị nwere ike mpikota onyinyo oyiyi ahụ;
- na-agbanwe ihe oyiyi n'ime ụdị dị iche iche;
- mepụta ihe oyiyi diski diski (eleghị anya ọ gaghị aba uru, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ọrụ / ụlọ akwụkwọ na-eri ochie PC - ọ ga-abịa n'aka);
- mepụta diski bootable, wdg.
- mmepụta nke usoro ihe omume ahụ na-ele anya site n'usoro oge a "na-agwụ ike";
N'izugbe, ọrụ niile dị ka ọ dị ugbu a, ma site na okwu Anwansi na aha nke usoro ihe omume - Achọrọ m ihe ọzọ ...
Nke ahụ bụ ihe niile, niile na-arụ ọrụ / akwụkwọ / ezumike izu ...